बेहुलाले दुई दुना नजान्दा बिहे नै रद्द – AB Sansar
May 15, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on बेहुलाले दुई दुना नजान्दा बिहे नै रद्द
वास्तवमा जीवनसाथी छान्नका लागि हुनेवाला जीवनसाथीका निश्चित क्षमता वा दक्षता जसले पनि हेर्दछ । त्यसमध्ये शैक्षिक स्तर एउटा महत्वपूर्ण मापदण्ड हो ।कतिपयले बिहे टुंगो लागिसक्दा समेत आफ्नो वास्तविक शैक्षिक योग्यता लुकाउने गर्दछन् । आफ्नो पति वा पत्नीसँग आफ्नो शैक्षिक योग्यता लुकाएर लुक्ने कुरा कहाँ पो हो र ? एकदिन खुलासा भैहाल्छ भन्नेपनि हेक्का हुँदैन कतिपयलाई ।
आमाको कोरोनाका कारण मृ,त्यु भएपछि छोराले पनि भिरबाट हाम फालेर प्रा,ण त्या,गे !
अर्डर क्यान्सिल गरेपछि डेलिभरी ब्वाइले मु क्का हा ने…भाचियो हड्डी।